Pokemon Go inoonekwa seyakanakisa nhare mbozha munhoroondo | IPhone nhau
Pokemon Go inoonekwa seyakanakisa nhare mbozha nakare kose
Inongovepo kwemavhiki maviri, muchidimbu pfupi, nekuti inongowanikwa muUnited States, New Zealand, United Kingdom neAustralia. Zvakadaro, isu tinogona kutosimbisa izvo Pokémon Go rave rinonyanya kufarirwa nhare mbozha munhoroondo yeUnited States, uye nekudaro inozopedzisira yave yakanakisa nhare mbozha nakare kose. Hatizive kuti kufamba kwenguva kuchabata sei Pokémon Go, chatinga taure ndechekuti yakagadzira fivhiri yechokwadi iyo ichave yakaoma kufadza. Chikwata cheNiantic kubva paruoko rwaNintendo chaziva maitiro ekuita zvinhu zvakanaka kwazvo.
Inonyanya kubatsirwa kuve Nintendo, iyo yakaona kukosha kwayo kwemusika kuchikwira kusvika kungangoita 56 muzana. Pokémon Go parizvino ine vanopfuura mamirioni makumi maviri nemana vashandisi vanoshanda, anopfuura mamirioni makumi maviri Candy Crush Saga muna 2013, uye izvozvo pasina mubvunzo zvicharamba zvichiwedzera nekukurumidza pazvinotanga kusvika kune dzimwe nyika, zvisinei, vashandisi vakashinga sesu vatotanga kuikanda neimwe nzira, Muchidzidzo ichi tinokuratidza maitiro ekuodha pasi Pokémon Go ye iPhone. Yedu yakapusa yekumisikidza nzira yave kunyatso kufarirwa uye inokutendera iwe kunakidzwa nemutambo kubva kuSpain.
Zvese izvi zvichitarisa matambudziko nemaseva uye hombe huwandu hwetsikidzi iyo mutambo unotambura nayo. Nekudaro, zvakafanira kuve nenguva yakanaka yekuvhima ivo vese. Iwo magyms ari mumaguta (Pokémon ehe saizvozvo) anotanga kuve nevatungamiriri vechokwadi vaine imwe yakasimba Pokémon, zvichanetsa kuibvisa pachigaro. Hapana ari kuita zvirinani neruzha urwu rwese kupfuura Nintendo, ingori panguva yayo kwayanga iri mumadhiri, zvinoita sekunge ichanyatso simbisa kukambani, iyo tinovimba zvinokubatsira iwe kuti uite zvinhu nemazvo neNintendo NX kana kuti inozopedzisira yanyura mune yechokwadi Nokia maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Pokemon Go inoonekwa seyakanakisa nhare mbozha nakare kose
William Torres akadaro
Kupfuura iphone nhau izvi zvatoita kunge »Pokemon nhau»
Pindura kuna William Torres
Xavi Couselo Lopez akadaro
Haisi yechinhu pasina, asi iyo yekupedzisira ndima ine kunhuwa ...
Zviri FALSE zvachose kuti mutambo une zvipukanana (ongororo dzinoratidza chaizvo kuti kusavapo kweBugs, kunze kwe1 neiyo Google login, kuri nekuda kwekuti hwaro hwayo hwawakaitirwa hwakaedzwa kweGORE 3 ... ) saka iko kunyengera kwako zvachose manyepo. Ini handisi kuzvitaura, kuongororwa kwakazara kwechishandiso mune dzakasiyana midhiya anodaro. Kune rimwe divi, ndinoda kutaura kuti kana iwe Pokemon Go izere neBugs, saka ndinoda kuziva kuti ungatsanangure sei ios8 yako neIOS9….
"Tinotarisira kuti zvinokubatsira kugadzirisa zvinhu neNintendo NX kana kuti inozopedzisira yanyura muchimiro chechokwadi cheNokia." Ngatione kana isu tisina kurerutsa, nekuti kutaura uku ndekwe mafirework. Zvinoita kunge zvisinganzwisisike kwandiri kuti fan yeApple akazvitaura, nekuti ndiwo mutsara unogara wakatsaurirwa kuna Apple yekuisa zvitsva zvina pamutengo wegoridhe. Nintendo ikambani ine mutemo wekambani wakafanana chaizvo neApple, saka iwe unozoziva chimwe chinhu kana yagadzira humambo hwevaraidzo yemagetsi kwemakumi emakore, ichichinja indasitiri uye kuigadzirisazve nenzira imwechete iyo Apple yakaita neiyo iPhone.
Saka zvakati kurei zvakanyanya kukambani yakagadzira iyo crosshead pane mutongi, iyo yakagadzira iyo vibration panguva yemutambo, iyo yakashandura mitambo yemavhidhiyo neSuper Mario 64, iyo yakaburitsa mutambo wakanakisa zvachose »Zelda: Ocarina WeNguva« , iyo yakachinja iyo indasitiri neiyo Wii, uye iyo ichangobva kushandura mutambo parunhare neKokemon GO mumazuva manomwe chete.
Kana iwe ukafunga kuti iyi ndiyo nhete yakadonha yaNintendo, ipapo Apple yave kuda kutsakatika nemadonhwe mukutengesa, zero kukura, iyo iPad yakadonha, maMac ari pasi, uye neWatch iyo isiri iyo pitch yaida Apple. Tungamira chokwadi nehafu, isu tese tinoziva.
Pindura kuna Xavi Couselo Lopez
- Servers anogara achirovera
- Wese mushandisi wandinoziva akatambura maPokemoni kurasikirwa nekuti mutambo wakaomeswa nePokeBall
- Zvinonhuwira zvinowanzorasika mushure mekukanda
- Kutanga neGoogle kunorasika yega 2 × 3
- Iyo GPS inokuisa iwe 200m mugungwa sezvo iwe usina hanya
Ini ndaigona kuenderera, asi inopa yechinyorwa.
Nenzira, uchiona sezvo uri fan yakasimba yeNintendo, iwe unofanirwa kuziva kuti chinhu chega icho Nintendo anacho mumutambo uyu ndiyo kodzero yekushandisa Pokémon nemazita avo. Anovandudza ndiNiantic, anowanikwa neAlfabhethi INC (Google), chimwe chinhu chatakatotaura kakawanda pano.
Ini handitaure nezvematambudziko aNintendo, zvinonzi neMutungamiriri wayo anomanikidzwa kudzikisa muhoro wake neinopfuura hafu: http://www.meristation.com/nintendo-wii-u/noticias/el-presidente-de-nintendo-se-reduce-el-sueldo-a-la-mitad-por-las-ventas-de-wii-u/1365/1952938
Fungidzira kuti masheya anga amuka sei 86% mavhiki ano ... Nintendo anga ari kunze kwemusika kwemakore, uye kana iwe, zviri pachena NintendoFanboy (kuti dai waiziva kuunganidzwa kweNintendo zvigadzirwa zvandiinazvo, pamwe zvaizochinja yako zvisina musoro kupomerwa) iwe usati wapa account, ndiani achapa.
Zvakanaka, kana parizvino iri mutambo wepamhepo wakanyanya uripo, pamwe unofanirwa kurwa ne pokemon kuti uvavhime, kuti ugone kurwa nevamwe vashandisi kana ukasangana navo mumugwagwa kana neshamwari uye nekuita mitambo, kana isa izvi iwe uchazodya zvakakwana kupokana royale iyo parizvino mutambo wamambo
Ndiwo mutambo wakakomba wakanyanya? Maererano naani?
Mitambo yemavhidhiyo ine mabasa echokwadi ehunyanzvi, asinganzwisisike, ndinogona kunyora mazana kubva kumutambo wekutanga wandinoshamisira tenzi system (kushamisika mukomana III), zvishamiso zvemega drive senge comic zone, yapfuura mitambo munzvimbo yekutamba senge yekupedzisira kufungidzira VII. Kana pasina kuenderera mberi nechizvarwa chino nemitambo yakaita seyevaroyi, fallout 4, chaiyo-nguva zano senge nyeredzi 2. Uye mutambo uyu, uyo sechinhu chitsva unobatanidza chokwadi chakawedzerwa (uye HASI iwo mutambo wekutanga kuzviita), ndiwo mutambo wakanakisa yenhoroondo? Mutambo we micropayments?
Nei iri mutambo wakapusa, haufanire kuita zvakawanda, haina makore ekuzikanwa senge zvimwe zvishamiso zvakagadzirwa nevanhu.
Sei? Hazvina musoro.
Iko kusaremekedza kune yevhidhiyo mutambo indasitiri. Kushaikwa kwekuremekedzwa sega, konami, EA, atari, bethesa ... Uye yakareba nezvimwe, kutaura kuti Pokemon ndiwo mutambo wakanakisa wakamboitika. Ndinoona chirevo icho chisina kutsarukana, chakasuruvara uye chinodemba. Ndine urombo nekuzvidzokorora zvakanyanya, asi hazvigoneke kutenda.
"Wakanakisa nhare mbozha", ngativerengei iwo mavara akazara. Enzanisa blockbuster senge Kudonha 4 kana Rima Remweya 3, neuyu mutambo wakasarudzika, hauna musoro kana muswe. Ndiwo mutambo wepamhepo wakanyanya nekuti vashandisi vakasarudza nenzira iyoyo, nekuitamba.
Mutsva iPhone 7 mockup mufananidzo unoratidza kuti uchave uine mbeveve switch